Bayaanka: Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) waxay ku baaqeysaa in cadaalad loo helo muhaajiriinta ku jira xariga iyo soo celinta soogalootiga iyo dhaqan galinta canshuuraha - Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > Press Release > Bayaanka: Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu ku baaqayaa in caddaalad laga helo muhaajiriinta ku jira xariga iyo soo celinta ajnebiga iyo dhaqan galinta kastamyada
Bayaanka: Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado (CIRC) wuxuu ku baaqayaa in caddaalad laga helo muhaajiriinta ku jira xariga iyo soo celinta ajnebiga iyo dhaqan galinta kastamyada
Denver, CO - Xog-haye ka socda xarunta lagu hayo dadka muhaajiriinta ah ee Irwin County ee Georgia ayaa ka warbixiyay xadgudubyo caafimaad oo kala duwan oo ay u geysteen maxaabiista muhaajiriinta ah ee ay qabteen saraakiisha ICE oo ay ku jiraan qasab qasab ah iyo "dayacaad caafimaad darro" intii lagu jiray cudurka faafa ee coronavirus. CIRC waxay cambaareyneysaa xasuuqyadan waxayna ku baaqeysaa in cadaalada la siiyo muhaajiriinta la xiray, isla markiiba in la xiro xarun kasta oo dadka lagu xiro, iyo in la soo afjaro ku dhaqanka Immigration iyo Customs (ICE).
“Warbixinadan ugu dambeeyay ee xadgudubka ee ICE gebi ahaanba waa kuwo laga naxo, laakiin nasiib daro ma ahan kuwo ka baxsan taariikhda ICE. Waa qeyb ka mid ah gaboodfallo muddo dheer socday oo ka dhan ah xuquuqda aasaasiga ah ee xuquuqda aadanaha ee muhaajiriinta ay beegsatay hay'addani. Marka laga reebo in bulshooyinka laga dhigo kuwo nabdoon, waa iska cadahay in ICE ay masuul ka ahayd oo ay sii wadayso masuuliyada ficillada canaanashada ah ee loo geysto magaca dowladeena - hay'ad loo malaynayo in ay matasho dhamaanteen. Gladis Ibarra, Maareeyaha Ololaha ee CIRC.
Maaha markii ugu horaysay ee wararka xadgudubku ka soo baxaan Xarunta Xabsiga ee Degmada Irwin. Bishii Abriil, maxaabiista ku jirta isla xaruntani waxay galeen khatar shaqsiyadeed oo aad u weyn si ay u dhoofiyaan muuqaallo fiidiyoow ah oo muujinaya xaaladda murugsan ee ka jirta xarunta, oo ay ku jiraan saraakiisha ICE oo si badheedh ah u iska indhatiraya taxaddarka karantiilka ee COVID-19 Warbixinnada ayaa ka soo baxay xaalado isku mid ah xarumaha kale ee ICE-da ee waddanka oo dhan, oo ay ku jiraan Xarunta Aurora GEO ee ku taal Colorado. Layaab malahan in xarumahaani ay arkeen dillaac baahsan oo coronavirus ah. Sidoo kale ma aha wax lala yaabo in hay'ad qabata waalidiinta sugeysa inay caruurtooda ka kaxeyso iskuulka isla markaana caruurta gelisa qafisyada aysan dan ka laheyn baahiyaha caafimaad ee aasaasiga ah ee dadka ay daryeelayaan.
Weli, wararkii ugu dambeeyay ee hysterectomies ee lagu qasbay dumarka waa kuwo aad looga naxo. Taariikhda cunsuriyadda ee ku qasbid jeermis ku qasbid jirka dadka madow iyo bunni ee Mareykanka waa mid dheer oo laga xishoodo. Shuruucda 'Eugenics' ee waddankeennu soo saaray 1900-meeyadii, oo ay kujiraan nadiifinta qasabka ah ee kuwa loo arko inaysan u qalmin taranka, waxay u soo bandhigtay qaab Nazi Jarmalka tobaneeyo sano ka dib. Xilliyadii ugu dambeeyay ee 1970-yadii, isbitaal ku yaal magaalada Los Angeles ayaa la ogaaday inuu fara-xumeynayay haweenka Mexico iyo Mexico ee Mexico inta lagu guda jiro dhalmada si loogu oggolaado nadiifinta iyadoo ujeedadu tahay yareynta tirada dadka reer Mexico ee Ameerika. Tallaabooyinkeedii ugu dambeeyay, ICE waxay ku sii wadaysaa qaabkan qotada dheer ee dhibka ku haya taariikhda Mareykanka.
Dusti Gurule, oo ah agaasimaha fulinta ee ururka xubin ka ah CIRC ee COLOR, ayaa xustay in “taranka iyo is-maamulida jirka ee haweeneyda midabkeedu yahay mawduuc xakamayn iyo weerarba leh jiilalka. Waa inaan ka takhalusnaa siyaasadaha xaddidaya awoodda Black, Indigenous, Latinx iyo dadka kale ee midabka leh si ay u gaaraan go'aannadayada taranka iyo u halganka siyaasadaha dhiirrigeliya is-xukunka jirka. COLOR waxay gacan weyn ka geysatay la dagaalanka caddaaladda haweenka midabka leh ee Colorado tan iyo markii la aasaasay labaatan sano ka hor koox aasaasi ah oo Latinas ah. CIRC waxay ku faaneysaa inay la istaageyso COLOR difaackeeda ay ka go'an tahay xuquuqda caafimaadka iyo ismaamulka jirka ee soogalootiga iyo dadka midabka leh.
Tallaabooyinkan looma qaadi karo xadgudubyo go'doon ah, ama mid buluug-buluug ah oo ka baxsan hawlgallada ICE. Nidaamka socdaalka ee dalkeenna wuxuu u qaabaysan yahay inuu xubnaha bulshada ee nugul u soo jiido xarumaha lagu hayo ee ICE si ay ula kulmaan dayac, rabshad, iyo xadgudub. Tani waa inay hadda isbedeshaa. Dhammaan xarumaha lagu hayo waa in la xidho, ICE-na waa in la difaacaa si loo joojiyo xad-gudubyada baahsan ee xuquuqul insaanka ee ay dawladdu oggolaatay ee ka dhanka ah bulshooyinka soogalootiga ah. Uma dulqaadan doono hal sheeko oo naxdin leh. Shirwaynuhu waa inuu meel mariyaa sharciga dib u habaynta soogalootiga oo dhammaystiran oo siinaya waddo loo maro muwaadinimada dadka oo dhan, iyo nabadgelyada jidka.
Waxaan salaameynaa ficilka geesinimada leh ee Dawn Wooten, kalkaalisada xarunta Irwin County ee qatar gelisay shaqadeeda si ay u soo bandhigto xaaladan naxdinta leh. Waa inaan sharfnaa go'aankeeda ah inay ka hadasho xadgudubka dhacaya iyadoo si deg deg ah wax looga qabanayo dhaqanadan dembiyeed ee ka baxsan bini'aadanimada.